Ogaden News Agency (ONA) – Labo Kamid Ah Sirdoonka Wayaanaha oo Ladilay & Xaalada Gobolka Axmaarada oo Kacsan
Labo Kamid Ah Sirdoonka Wayaanaha oo Ladilay & Xaalada Gobolka Axmaarada oo Kacsan
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in kacdoon wadayaasha axmaaradu ay toogasho ku dileen labo kamid ah saraakiisha sirdoonka wayaanaha oo kashaqaynayay Gobolka Axmaarada.
Sida warku sheegayo dablay hubaysan oo kamid ah kacdoon wadayaasha Axmaarada ayaa goor habeenimo ah guryahooda kuweeraray saraakiishan katirsanaa sirdoonka wayaanaha waxaana lasheegayaa in ay isla goobta ku dileen.
Warka ayaa intaas kudaraya in labadan sargaal ee la dilay ay ahaayeen niman dhibaatooyin dhumuc leh ugaystay shacabka Axmaarada, waxaana lasheegayaa in ay nimankanu dadku guryahooda ugu dhici jireen kuna dhibaatayn jireen.
Ma aha markii ugu horaysay ee sidan oo kale loodilo saraakiisha sirdoonka wayaana, bilo kahor unbay ahayd markii 4 kamid ah ciidamada sirdoonka ee gumaysiga lagu dilay magaalada Bahardar kuwaas oo sida lasheegay dhibaatooyin kala duwan ugaystay dadka shacabka ah ee kusugan magaalada Bahardar.
Kacdoonada iyo dagaalada kasocda guud ahaan wadanka Itoobiya ayaa waji cusub galay waxaana muuqata in dadka shacabka ah ee kacdoonada wada ay go’aan sadeen in ay toogtaan ciidamada wayaanaha gaar ahaan xiliyada habeenkii ah taas oo keentay in ciidanka wayaanuhu ay xeryahooda ku ekaadaan.
Sida warkaanagii hore aan idiinku soo gudbinay magaalada bahardar ayaan laga seexanin habeen hore waxaana lasheegayaa in magaalada uu habeenkaas oo dhan kasocda dagaal laysu hadeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.